(46) Still Life Photography ဓါတ်ပုံပညာရပ်ဆိုင်ရာ မှတ်စု (၄၆)
သက်ငြိမ် ပုံများ ရိုက်ကူးခြင်း
Shooting of Still Life Photography
ယခု မှတ်စုကို ရေးသားရာ ၌ Photo and Video Magazine-Photo Clinic ၏ အကဲဖြတ် ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် John Cosgrove ရေးသား ထားသည့် Still Life’s ဆောင်းပါး၊ ဖိလစ်ပိုင် လူမျိုး သြစတေးလျှ နိုင်ငံသား Still Life အမြင့် တန်း ( Professional) ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် Alfonso Calero တို့၏ ဆောင်းပါး နှင့် Still Life Professional Photographer ဖြစ်သူ Simon Bray ၏ Get Started with Still Life Photography ဆောင်းပါးများ ကို အခြေခံကာ ရေးသား ထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘာသာပြန်ရာ တွင် အချို့ သော နည်း ပညာ ဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အသုံးအနှုံး များအား မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုပါက လိုရင်း မရောက်ဘဲ ဝေ့ လယ်လယ် ဖြစ်တတ် သဖြင့် မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အတိုင်း ပင် ရေးထားပါသည်။
နမူ နာ ပုံ များမှာ မူ အဆိုပါ ဆောင်းပါး များတွင် ပါရှိသည့် ပုံ များကို ပြန်လည် ကူးယူ ဖေါ်ပြထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အချို့ သောပုံ များ ကိုမူ စာအုပ် မှ တစ်ဆင့် ကူးယူ ဖေါ် ပြထား သည့် ပုံ များ ဖြစ်သည့် အတွက် မူယင်း ပုံ များ ၏ အရည် အသွေး မဟုတ် ကြောင်းကြို တင် ဖေါ် ပြ အပ်ပါသည်။
Indoor Still Life နမူ နာ ပုံ။
Still Life Photography ဆိုသည့် စကားစု ကို ဘာသာပြန်ရာ တွင် လုံးကောက် ဆန်ဆန် ဘာသာပြန် သည့် “ သက်ငြိမ် ပုံ များ ရိုက် ကူး ခြင်း “ ဆိုသည် က ပို၍ သင့်မြတ် မည် ထင် သည့် အတွက် ထို အတိုင်း ပင် ဘာသာ ပြန် လိုက် ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
Still Life Photography ၏ အဓိပ္မါယ် ရင်း မှာ မူ နေ့ စဉ် လှုပ် ရှား မှု ဘ၀ အတွင်း တွေ့ မြင်နေကျ လှုပ်ရှားမှု ကင်းမဲ့သည့် အရာ များ ဖြစ်သော သစ်သီးများ၊ ပန်းများ၊ ပန်းကန် ခွက်ယောက်များ၊ စသည့် သက်မဲ့ ပစ္စည်း များကို သဘာဝ အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ Lighting, Arrangement, Angle စသည် တို့ ကို စိတ် တိုင်းကျ စီစဉ် ရိုက် ကူး သည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။
အချို့ သော ဓါတ်ပုံ ပညာရှင်များက အာရုံ ဖမ်းစားရာ (Center of Interest – COI ) တစ်ခု ထည်း ကိုသာ အလေး ပေး ရိုက်ကူးသည့် ရိုက် နည်း ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ ရာ တွင် ယခု အချိန်တွင် COI တစ်ခု ထက် မက ပိုနေသည့် ပုံ များလည်း ရှိ နေသည် ကို တွေ့ ရပါသည်။ ဤ ကဲ့ သို့ စိတ်ကြိုက် ဆင်ရိုက် သည့် နည်း ဖြစ် သောကြောင့် စတူဒီယို ထဲတွင် ဆင်ရိုက် တာတွေ အားလုံး ဟာ Still Life Photography ဘဲ ဟု အချို့သော ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင်များ က ဆိုကြ ပါသည်။
စင်စစ်အားဖြင့် ဤ ရိုက်ကူး နည်းသည် လူအများ နေ့ စဉ် တွေ့ မြင်နေ ကြ ပစ္စည်း ပစ္စယ များကို ရိုက်ကူးခြင်း ဖြစ် သည့်အတွက် အမြင် ဆန်း သစ် ကာ စိတ် ၀င်စား ဘွယ် ရာ ကောင်းလာအောင် အလင်းရောင် (Light) ကို အမျိုးမျိုး ပြင်ဆင် ပေး ခြင်း ၊ Subject များအား လှပ ဆန်း ကျယ်စွာ ( Arrangement ) ပြင်ဆင် ထား ရှိခြင်း တို့ ဖြင့် ရိုက် ကူး သည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။
Outdoor Still Life နမူနာ ပုံ။
Still Life Photography ရိုက်ကူး ခြင်း။
Still Life Photography ရိုက်ကူးရာ တွင် ပြင်ပတွင် Outdoor ရိုက်ကူးခြင်း နှင့် စတူဒီယို ကဲ့သို့ အဆောက်အအုံ အတွင်း Indoor ရိုက်ကူးခြင်းဟူ ၍ နှစ်မျိုး ရှိပါသည်။
Outdoor Still Life Shooting.
ပြင်ပ တွင် Still Life ရိုက်ကူးရန် နေရာ ပစ္စည်း မြောက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ သို့ သော် မိမိ က အဆိုပါ ပစ္စည်း ( Subject ) ကို မည်ကဲ့သို့ တင်ပြ မည် နည်း ဆိုသည့် စိတ်ကူးသည် အရေး အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပ ၌ Still Life ရိုက်ရာ တွင် မူ စတူဒီယို အတွင်း ရိုက်သကဲ့သို့ Subject Arrangement, Composition နှင့် Lighting တို့ ကို စိတ် ကြိုက် ဆင်ရိုက်၍ မရ သဖြင့် မည်ကဲ့ သို့ ပုံစံမျိုး ရိုက် မည် ဆိုသည့် စိတ်ကူး ဥာဏ်ကွန့်မြူ မှု နှင့် Camera Angle တို့ က များစွာ အရေး ကြီး လာပါသည်။
Outdoor Still Life Shooting နှင့် ပတ်သက်၍ ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် Alfonso Calero က Outdoor Still Life Shooting ရိုက် ရန် အတွက် အလွယ် ဆုံး နှင့် အကောင်း ဆုံး နေရာသည် ဈေး ( Market Place ) ဖြစ်ဟု ဆိုပါသည်။ Outdoor Still Life Shooting ရိုက်ရန် များစွာ ပေါ များ သော နေရာ ဖြစ်ပါသည်။
နေ့ ခင်း နေ၏ အလင်း ရောင် သည် Portrait ရိုက်ရန် မကောင်းစေကာမူ Outdoor Still Life Shooting ရိုက်ရာတွင်မူ ရူပ်လုံးကြွ လာစေသည့် အလင်း မျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ဈေး နေရာ တွင် ရိုက်ပါက အောက်ပါ အချက် များ ကို ဆောင်ရွက်ရန် ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် Alfonso Calero က အကြံပြု ထားပါသည်။ အောက်တွင် သုံး ထားသည့် “ ကျွန်တော် “ ဟူသော အသုံး အနှုံးသည် ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် Alfonso Calero ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
၁။ ဈေး အတွင်း ရိုက်ရာ ၌ မရိုက်မှီ ဆိုင်ရှင်ထံ ခွင့် တောင်းရပါမည်။ ဈေး ၀ယ် လာသူများကို အနှောက် အယှက် မဖြစ်စေရန် လိုပါသည်။ တတ်နိုင်သမျှ မြန် မြန်ပြီး အောင် ရိုက်ရပါမည်။ ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ စွာ ရိုက်ရပါမည်။
၂။ မရိုက် မှီ ဈေး အတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ပါ။ မည်သည့် အရာများသည် စိတ်ဝင် စားဘွယ်ရာ ဖြစ်သည် ကို အရင် လေ့လာပါ။ ပြီးမှ သာ အကောင်းဆုံးနေရာ များ တွင် ရိုက်ပါ။ ပုံ များကို တစ်ပုံ မက ပို၍ ရိုက်ထား ရန် လိုပါသည်။
ဓါတ်ပုံ ပညာ ရှင် Alfonso Calero ကမူ ၄င်း Tasmania ရှိ Evandale Market တွင် ရိုက် ခဲ့သော လဘက်ရည်ခွက်၊ မုံ့ ဖုတ် သည့် အိုး စသည့် အောက်ပါပုံ များကို နမူနာ ပြထားပါသည်။
၃။ အချို့သော ဓါတ် ပုံ ပညာရှင်များသည် Mid-Day Light ဖြင့် ရိုက်ခြင်း ကို ရှောင် ကြပါသည်။ ကျွန်တော့် အနေနှင့်မူ အထက်တွင် ဖေါ်ပြပြီး ဖြစ်သကဲ့သို့ Mid-Day Light သည် Portrait အတွက် အတော် အဆင် မပြေ လှ သည့် အလင်း ဖြစ် စေကာ မူ Still Life ရိုက်ရာ တွင် အဆိုပါ အလင်းရောင်ကြောင့် ထွက်လာသည့် Crisp shadows က ပုံကို Simple geometric shapes ပေါ်လာစေသည့် အတွက် ကျွန်တော် ကြိုက်သည့် အလင်းရောင် ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပ၌ Still Life ရိုက်ရာတွင် ဤ ကဲ့သို့ High-contrast lighting က ပိုကောင်းပါသည်။
၄။ Subject ပေါ်သို့ ကျ နေသော နေရာင်ချည် ၏ Angle ကို လေ့လာရပါမည်။ ထို အချက် မှာ အရေး ကြီးပါသည်။ ရိုက် ရမည့် Subject များ မိမိ ရွေးထားသည့် Lighting angle နှင့် Intensity အတွင်း အားလုံး ကျနေစေရန် လိုပါမည်။ အပေါ် မှ မိုး ၍ ရိုက် လျှင် Subject များအပေါ် မိမိ အရိပ် မထိုး နေစေရန် သတိပြု ရပါမည်။
Use one focal length.
၅။ Theme တစ်ခု အတွက် ပုံ များကို များစွာ ရိုက်လျှင် Focal Length တစ်ခု ထည်း ဖြင့် ရိုက်ရပါမည်။ ကျွန်တော် အနေနှင့် မူ ပုံ အားလုံးကို 35mm ဖြင့် ရိုက်ပါ သည်။ သို့ ဖြင့် အစဉ် အတိုင်း တစ်ပြေးညီ ခံ စားမှု ပေး နိုင်ပါလိမ့် မည်။
၆။ ပုံ များ ပြတ်သားနေစေရေး အတွက် ကျွန်တော် သုံးသည့် Apeature မှာ f/5.6 နှင့် f/8 တို့ ဖြစ်ပါသည်။ များသော အားဖြင့် Lens အများစု သည် အပြတ်သား ဆုံး အတွက် Maximum Aperture Setting မှ Two/Three Stop အထိ ချ၍ ရပါသည်။ ကျွန်တော် သုံးသည့် Lens မှာ 24-70mm, f/2.8 ဖြစ်ရာ Aperture 8 ဖြင် ရိုက်ခြင်း ဖြင့် Depth of Field အတာ် ထူထူ ရှိသော ရှိသောကြောင့် ရှေ့ ရော နောက်ပါ ပြတ်သား သည့် ပုံ ရပါသည်။
၇။ ပုံ များကို Edit လုပ်ရာတွင် အားလုံးကို Software တစ်ခု ထည်း တွင် လုပ်ရပါမည်။ ကျွန်တော် သည် Light Room-4 တွင် saturation, colour, contrast, clarity, vibrance, noise reduction, sharpness and vignette စသည် တို့ ကို Edit လုပ်ပါသည်။ ရိုက်စဉ်က အားလုံးကို တူညီသော Light Intensity ဖြင့် ရိုက်ကူးခဲ့သောကြောင့် Edit လုပ်ရာ တွင် လည်း တစ်ပြေးညီ ဖြစ်ရန် လိုပါသည်။
Imagination and Tripod.
ဓါတ်ပုံ ပညာရှင် John Cosgrove ကမူ Outdoor Still Life ရိုက်လျှင် ကနဦး အဆင့် အဖြစ် မိမိ၏ စိတ်ကူး ဥာဏ် ကွန့်မြူး မှု ( Imagination) နှင့် Tripod တို့ ပါအောင်ယူသွားရန်မှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်ဟု ပဏာမ တိုက်တွန်း ထားပါ သည်။
မှန်ပါသည် Still Life Photography သည် မည်သို့ မျှ ဆန်းကျယ်ခြင်း မရှိသော နေ့ တစ်ဓူဝ တွေ့ မြင်နေကျ အရာ များကို ရိုက်ခြင်း ဖြစ်ရာ ပုံ အပေါ် စိတ်ဝင် တစား ဖြစ်လာစေမှုသည် ဓါတ်ပုံ ဆရာ ၏ စိတ် ကူးဥာဏ် ကွန့်မြူးကာ တင်ပြမှု အပေါ်တွင် လုံးလုံးလျှားလျှား တည်နေ သည့် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
၄င်း အပြင် Outdoor Still Life Photography ရိုက်ရန် ခရီးစဉ် စ လိုက်သည်နှင့် မိမိ၏ စိတ်အလျှင် ကို ဖွင့်ထားရန် ( Open up your mind ) ဖြစ်ရန် လိုပါသည်။ သို့ မှသာ လျှင် ထူးခြားစွာ ရှိနေသည့် အရာ ၀တ္တု၊ ပစ္စည်း များကို မြင် နိုင်ပေမည်။
မိမိ Still Life ရိုက်မည့် ရိုက်ကွင်းထဲ ရောက် လာပြီ ဆိုပါက -
၁။ မိမိ ရိုက်မည့် အကြောင်း အရာ (Theme ) ကို ထိမိ စေမည့် အရောင် ရှိသည့် Subject ကို ရှာရပါမည်။
၂။ မိမိ ရိုက်မည့် အကြောင်း အရာ (Theme ) သည် ဥပမာ အား ဖြင့် အ၀ိုင်း ( Circle ) ဆိုလျှင် အ၀ိုင်း ကို ပင် သော်လည်းကောင်း ၊ လေး ထောင့် ( Square ) ဆိုပါ ကလည်း လေးထောင့် ပင် သော်လည်းကောင်း ရွေး ကာရိုက် သင့်ပါသည်။
၃။ အရောင် နှင့်ပတ်သက်၍ တစ်ရောင် နှင့် တစ်ရောင် အားပြု သည့် အနီ နှင့် အ၀ါ သို့ မဟုတ် အပြာ နှင့် အ၀ါ အရောင် တွဲများကို ရွေးသင့်ပါသည်။
၄။ အချိန် ယူ ပြီး Subject ၏ ပတ်ပတ်လယ် ကို ပတ်၍ ကြည့်ကာ Angle ကောင်း ကို ရှာ ရပါမည်။
၅။ Subject ကို Lens အတွင်း မှသာ ကြည့်ပါ။ အပြင် ဘက် က နေ မကြည့်ပါ နှင့်။ Lens ထဲက ကြည့်မှသာလျှင် ထွက်လာမည့် ပုံ နှင့် အနီး စပ်ဆုံးကို မြင် နိုင်ပါမည်။
၁။ ကင်မရာ Metering Mode ကို Matrix သို့ မဟုတ် Evaluative တွင် ထားပါ။ သို့ မှာလျှင် Highlight ရရှိကာ Shadow Effect များရ နိုင်ပါမည်။
၂။ ကင်မရာ Exposure Mode ကို Aperture Priority Mode တွင် ထားပါ။ ပုံ၏ Saturation တက်လာစေရန် Exposure Companion ကို (-1/3) တွင် ထားပါ။
၃။ အရောင် နှင့် ပတ်သက်၍ မူ မိမိရိုက်နေကျ Colour Space ဖြစ်စေ၊ sRGB or Adobe RGB တို့ ကို ဖြစ်စေ သုံး နိုင်ပါသည်။
၄။ ရိုက်သည့် Aperture အနေနှင့်မူ DSLR အတွက် f-8 or 11 နှင့် Compact အနေနှင့်မူ f- 4.5 နှင့် 5.6 တို့ ကို သုံး နိုင်ပါသည်။
၅။ ရိုက်သည့် အချိန်တိုင်းတွင် တတ် နိုင်သမျှ Tripod ကို သုံး ရန် သင့် ပါသည်။
၆။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခြင်း သည် အပြေးပြိုင် နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ အချိန် တတ်နိုင်သမျှ ယူ ကာ ရိုက် ရပါမည်။
Still Life ရိုက်ရန် လမ်းပေါ် ထွက် လာလျှင် လှုပ်ရှားနေသည့် Subject များကို မေ့ ထားလိုက်ပါ။ အရောင် နှင့် အလင်း တို့ ပုံ ကို ကြွ နေ အောင် တွဲ ဘက် လျှက် ရှိသည့် ( Colour and Light Contrast ) ငြိမ် နေသည့် ( Still Subject ) များကိုသာ ရှာပါ။ နံ နက် စောစော ထွက် နိုင်လျှင် ကောင်းပါသည်။ သို့ မှ သာလျှင် လူ သူ အနှောက် အယှက် ကင်းပေ လိမ့် မည်။
လမ်းထိပ် တစ်ခုတွင် ရပ် လိုက်ပါ။ သူသွားလမ်း၊ နံရံ၊ ခေါင်းမိုး ပေါ် တို့ အားလုံး ပေါ် တွင် Subject ကို ရှာကြည့်ပါ။ ရန် ဖန် ရန်ခါ ကောင်းမွန်သည့် Subject သည် မိမိ၏ နောက် တွင် ရှိနေတတ်သည်ကိုလည်း သတိပြု ရပါမည်။ Lighting အခြေအနေ အမျိုးမျိုး တွင် ရိုက်ကြည့် ပါ။ ပြီးလျှင် မည်သည့် Effect ထွက်လာသည်ကို ပြန် စစ်ကြည့်ပါ။ စိတ် ကြိုက် ရ သည့် အနေအထားတစ် ခု ကို ရွေးပါ။
Indoor Still Life Shooting.
ဤ ရိုက်နည်း တွင် လည်း Lighting နှင့် Colour တို့ ၏ ကွန့် မြူးမှု သည် ရှေး အစဉ် အဆက် ထည်းက သုံးခဲ့သည့် သမားရိုးကျ နည်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်ပ ( Outdoor) ရိုက် သည် နှင့် ကွာ ခြားချက် မှာ Indoor ရိုက်ရာတွင် Lighting ကို စိတ် ကြိုက် ဆင်ရိုက်၍ ရခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။ Google Image Search ဖြင့် ပုံပေါင်းများ စွာ ကို နမူ နာ ကြည့် နိုင်ပါသည်။ ယေဘူယျ အားဖြင့် အောက်ပါ နည်း များ အတိုင်း ဆောင်ရွက် သင့်ပါသည်။
သာမန် Still Life ရိုက်ရန်မှာ စတူဒီယို အကြီး မလိုပါ။ အထက် ပုံပါ ကဲ့ သို့ အိမ် အတွင်း မျာ ပင် ဆင် ၍ ရိုက် နိုင်ပါသည်။ စာပွဲလေး တစ်လုံးကို ပြူတင်းပေါက် အနားမှာ ထားပြီး ခပ်ရိုးရိုး နောက်ခံ လေး နဲ့ မီးလုံးလေး နှစ်လုံး သုံးလုံးလောက် ဆို တော်ရုံ သင့်ရုံ Still Life ရိုက် နိုင်ပါသည်။
နောက်ခံ သည် ရိုးစင်းနေသည်က ပိုကောင်းပါသည်။ မိမိ အဓိက ပြလိုသည်က ရှေ့ တွင်ရှိ Subject ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Indoor Still Life Photography ၏ အားသာ ချက်မှာ အခြေ အနေ အားလုံးကို မိမိ က ထိမ်းချုပ် ထားနိုင်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါ သည်။
2. Choosing the Subject.
ဘာပုံ ရိုက်မည် နည်းဆိုသည်မှာ မိမိစိတ် ကြိုက် ဆုံးဖြတ် နိုင်ပါသည်။ အိမ် အတွင်းရှာ ကြည့်လျှင် ရိုက် ခြင် စရာ များစွာ တွေ့ ရပါမည်။ သို့ ရာတွင် ပန်း တို့ သစ်သီးတို့ လို မျိုး ကို တတ်နိုင် လျှင် ရှောင်စေခြင် ပါသည်။ အကြောင်း မှာ လူတိုင်း လိုလို ရိုက်လေ့ ရှိသည့် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အသစ် အဆန်း ကို စမ်း ကြည့် စေလိုပါသည်။
ရိုက်ရာ တွင် အလင်းရောင် ပြန် နေသည့် သတ္တု ပြား၊ ဖန်ပြား တို့ ကို ရှောင် စေလိုပါသည်။ အဆိုပါ အရာ များသည် Lighting အတွက် များစွာ အနှောက် အယှက် ဖြစ်စေသည့် အရာများ ဖြစ်ကြပါသည်။ မိမိ ကိုယ်နှိုက်က အတော် ကျွမ်းကျင်လာပြီ ဆိုလျှင် Colour, Texture, Shape တို့ Contrast ဖြစ်နေသည့် Subject များကို ရိုက် ကြည့် နိုင်ပါသည်။
စင်စစ် အားဖြင့် စီစဉ် တတ်လျှင် Lighting သည် တန်ဘိုး မကြီးလှပါ။ အချို့ သော စတူဒီယို Lighting များသည်ပင် တော် သင့် ရုံ Budget ဖြင့် မှီ နိုင်ပါသည်။ အလွယ်ဆုံး နည်း မှာ ပြင်ပ မှ အလင်းရောင် များ မ၀င် နိုင်စေရန် အပေါက်များကို ပိတ်ပါ။ ပြီး မှ မိမိ လိုသည့် Lighting ကို ဆင်ပါ။ ဤသို့ ဖြင့် စိတ်တိုင်း ကျ Lighting များရနိုင် ပါမည်။ ပြင်ပ မှ အလင်းရောင်ကို စိတ် တိုင်းကျ ထိမ်းချုပ် ရန် ခက်ပါသည်။
အိမ်သုံး မီး လုံးများကိုလည်း ထိရောက်စွာ ပြင် ဆင် နိုင်လျှင် လွန်စွာ အသုံးတည့်ပါ သည်။ Lighting Set up ကို အမျိုးမျိုး ဆင်ကြည့် ရန် လိုပါမည်။
Lighting Set up ကို ရှေ့ တည့်တည့် ချဉ်း မှ မဟုတ်ဘဲ ၊ ဘေးဘက်၊ နောက် ဘက် စသည့် နေရာ များမှ ဆင်ကြည့်ပါ။ ပေါ် ထွက် လာမည့် Subject ၏ အရိပ်များကို ကြည့်ပါ။ ပုံ ရိပ် ပေါ် မည့် အနေအထားကို ကြည့်ပါ။
အခြားတစ်နည်း မှာ အလင်းရောင် လုံလောက်စွာ ၀င်သည့် ပြူ တင်းပေါက် နားတွင် Set up ကို ဆင်ပါက Subject ၏ တစ်ဘက်မှ ၀င်လာသည့် သဘာဝ Lighting ရ နိုင်ပါသည်။ ထို Lighting ကို အခြေခံကာ မိမိ လို ခြင်သည့် Lighting အတွက် မီးလုံးများ ရောင် ပြန် ပြားများ စသည် တို့ ကို ထပ် ဖြည့် နိုင်ပါသည်။
မိမိ ပေးထားသည့် Lighting အနေ အထားပေါ် မူတည် ၍ Tripod သုံးရန် လိုလာပါမည်။ Still Life ရိုက်ရာ တွင် အရှေ့ အနောက် အားလုံး ပြတ်သားရန် လိုအပ်သည့် ပုံ များ အတွက်မူ Aperture ကျဉ်းကျဉ်း သုံးလေ့ရှိရာ Shuter Speed နှေးလာသည့် အတွက် Tripod သုံးပြီး ရိုက်ရန် ပို သင့် လျှော် ပါသည်။
ရိုက်ရာတွင် အမြင့်၊ အနိမ့်၊ Angle အမျိုးမျိုး ပြောင်း ရိုက်ရန် သင့်ပါသည်။ တစ်နေရာ မျ တစ်မျိုး ထည်း ရိုက်ခြင်း ကို ရှောင် သင့်ပါသည်။ Subject ကို အပေါ် စီး မှ Bird’s eye view ဖြင့်ကြည့်ပါ။ သို့ ရာ တွင် Subject အပေါ် သို့ အရိပ် ကျ နေသည့် အဖြစ်မျိုး ကို သတိ ပြု ရပါမည်။
5. Get the backdrop right.
Subject နှင့် လိုက်လျှော ညီထွေ ရှိသည့် နောက်ခံ Background သည် ပုံ ပေါ် လာစေရေး အတွက် များစွာ အဓိက ကျပါသည်။ နောက် ခံ သည် ရိုးရိုး လေး နှင့် ကောင်းမွန် ( Nice and Simple ) နေရန် လိုပါသည်။ တစ်ရောင်ထည်း ချယ်ထား သော နံ ရံ၊ တစ်ရောင်ထည်း ချယ်ထား သော အပြား၊ အဖြူရောင် စက္ကူချပ် ၊ စသည် တို့ သည် ကောင်း မွန်သည့် နောက်ခံ များ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ခံ နှင့် Subject တို့ ၏ Contrast ဖြစ်နေရန် လို သလား၊ သို့ မဟုတ် သဘာဝ အလင်းအတိုင်းဘဲ ထားလို သလား စသည်တို့ ကို စဉ်း စားရန် လိုပါသည်။ Subject သေးသေးလေး များအတွက်မူ Backdrop မလိုလှပါ။ Black Velvet လို အပေါ်တွင် တင်ထားလျှင် အနက်ရောင်က အလင်းကို စုတ် လိုက် မည် ဖြစ်သဖြင့် ရောင်ပြန် များ ပြောက် ကုန်ပါလိမ့်မည်။
6. Composing the shot.
Subject ကို နေရာချ ခြင်း (Compositional element of the Subject ) သည် Still Life Photography တွင် မိမိ ပြ လိုသည့် ပုံ အထူးပြု ပေါ်လွင် စေရေး အတွက် များစွာ အရေးကြီး ပါသည်။ ဤနေရာ တွင် ဓါတ်ပုံ ဥပဒေသ တစ်ခု ဖြစ်သည့် Rule of Thirds အတိုင်း နေရာ ချသင့်ပါသည်။ မိမိ ရိုက်သည့် Frame အတွင်း Subject အား အနှောက် အယှက် ( Distraction ) မရှိ စေရေး ကိုလည်းသတိပြု ရပါမည်။ Subject နှင့် Background သည်သာ အဓိက ပေါ် လွင် နေရန်လိုပါသည်။ ပုံ ကို ပေါ်လွင်စေရန် မည်သို့ လုပ်ဆောင် မည်နည်း၊ ယင်းကဲ့ သို့ ဖြစ်လာစေရန် ဘာတွေကို သုံးမည်နည်း ၊ ဤ ကဲ့ သို့ ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် မိမိ တင်ပြလိုသည့် ကို ထင်လင်းစွာ ပေါ် လေမည်လား စသည်တို့ ကို အဆင့်ဆင့် စဉ်းစား ရန် လိုပါမည်။
Indoor Still Life Photography ရိုက်ရာ တွင် ရှုခင်း ရိုက်သကဲ့ သို့ Lighting သည် ရုတ်ချဉ်း ပြောင်းသွားသည် ဟူ၍မရှိပါ။ အားလုံးကို ဆင်၍ ရိုက်ရသဖြင့် မြင်ကွင်းသည် ပျင်းရိဘွယ်ရာ မဖြစ်။ မိမိ ဆင်ထားသည့် မီး၊ နောက်ခံ ၊ ကင်မရာ စသည်တို့ ကို နေရာ အမျိုးမျိုး ပြောင်းကာ ရိုက်ကြည့်ပါ။ အဆင်မပြေ ဟု ထင်ပါက ရိုက်ကူးခြင်းကို ခေတ္တ နားလိုက်ပါ။ ကိုယ်ရော စိတ် ပါ အနားရ သည့် အချိန်တွင် ပြန်လာကာ စိတ်ကူး သစ်ဖြင့် အလုပ်ပြန်စပါ။
ပုံ များပြတ်သားမှု မရှိပါက Lighting ကိုပြန် စီစဉ်ရပါမည်။ ၄င်းအပြင် Focusing ကို တိကျ အောင် ပြန် ချိန် ရန် လိုပါမည်။ အနုစိတ်များကို ရိုက်ရာ တွင် Micro Lens များသည် များစွာ အသုံး ၀င်ပါသည်။ သို့ မဟုတ်ပါက လည်း Micro Mode ပါသည် Lens များ ကို သုံး နိုင်ပါသည်။
Still Life အတွက် Lighting ဆင်ခြင်း Arrangement ပြုလုပ်ခြင်း များ အတွက် စိတ် တိုင်း မကျ ဖြစ်နေ လျှင် ထိပ်တန်း နံမည်ကြီး Still Life ပုံ များကို ပြန်စဉ်းစား ကြည့် ပြီး ၄င်း တို့ ၏ အပြင် အဆင် ကို ဈာန် သွင်းယူပါ။ အဆိုပါ ပုံ များ က Lighting မည်ကဲ့သို့ ယူ ထားသည်၊ အရောင်မည်ကဲ့ သို့ စပ် သည်၊ ပုံ ကို Arrangement မည်ကဲ့သိ်ု့ လုပ် ထားသည် စသည် တို့ အတွက် စိတ်ကူးသစ် များပေးပါ လိမ့်မည်။
အစ ပိုင်းတွင် ပြူတင်းပေါက် နားတွင် သင့်တော်သည့် နောက်ခံ ( Background ) ချကာ လေ့ ကျင့် သည့် သဘော မျိုး ရိုက်ကြည့်ပါ။ အခြေ ခံ ရိုက်ခြင်း များ ကျွမ်းကျင် လာပါ Camera Angle, Light Angle, Alternative Light Source စသည် တို့ ကို ပြောင်းလဲ ကာ ရိုက်ကြည့်ပါ။
Camera Setting ကိုလည်း f-1.8 ကဲ့သို့ Prime Lens မျိုးဖြင့် အနုပညာ ဆန်သည့် Shallow Focus ( နောက်ခံ ၀ါးဝါး) ပုံ များရိုက်ကြည့်ပါ။ Still Life Photography သည် ပန်း နှင့် သစ်သီး များကိုသာ ရိုက်သည် မဟုတ် သည်ကို သတိပြုရပါမည်။ အခြားသော စိတ်ဝင်စား ဖွယ်ရာ ကောင်းသည့် အရာများကိုလည်း ရှာဖွေ ရိုက် ရန် လိုပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် အလင်းရောင်တွင် နှုတ် ခမ်းသားလေးများ တောက်ပ နေ သည့် ပုလင်း ၊ဖန်သား စသည်တို့ လည်း စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရာ ရိုက် နိုင်ပါသည်။
Still Life Photography ကို အသုံးများကြပါသည်။ စာကြည့် တိုက်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ လုပ်ငန်းများ၊တွင် သုံးကြ ပါသည်။ Still Life ပုံ ကောင်းကောင်း ရလျှင် On Line တွင် ဖြန့်ဝေရန် လက်မတွန့်သင့်ပါ။ Envato’s PhotoDune stock photography service စသည့် Service များမှ တစ်ဆင့် ဖြန့်ဝေခြင်း ဖြင့် Assignment များ ရလာနိုင်ပါသည်။
Golden Rules of Still Life Photograph
၁။ Indoor ရိုက်သည်ဖြစ်စေ Outdoor ရိုက်သည် ဖြစ်စေ စိတ်ကူး ဥာဏ် ကို အသေ ဘောင်မခတ် ထားဘဲ ဖွင့်ထား ရန် လိုပါသည်။ သို့ မှသာ ဆန်းသစ်သည့် စိတ်ကူး ဥာဏ် ကွန့်မြူး နိုင်ပါမည်။
၂။ ရိုက်ရာတွင် မလော ပါနှင့် သင့် တော်သည့် အချိန် ပေး၍ စိတ်တိုင်းကျ ရိုက်ပါ။
၃။ စိတ်ကူးများ ရှုပ်ထွေးနေပြီး အကြံ ဥာဏ် မထွက် ဘဲ ဖြစ်နေလျှင် တတ်ကြွမ်းသူ များ ၏ အကြံ ဥာဏ် တောင်းရန် ၀န်မလေးပါနှင့်။
Outdoor Still Life နမူနာ ပုံများ။
Indoor Still Life နမူနာ ပုံများ။
Posted by Soe Hlaing at 11:24